Dharka Yoga, Dharka Jimicsiga, Haweenka Ciyaaraha Bra, Ragga Gaaban - Arabella
Naqshadaha la heli karo ee hooseeya MOQ
Hoodies + Dhididka
Jaakadaha + Jaakadaha
T-Shirt + Taangiyada
Sumadda gaarka loo leeyahay
Warar & Aqoon
Faahfaahin MAYA GUUL
Waxaan haynaa qalab aad u horumarsan sida hoos ku xusan si aan u damaanad qaadno awoodda wax soo saar iyo tayo.
1. Mashiinka kormeerka dharka si loo damaanad qaado tayada qalabka soo galaya.
2. Mashiinka Mashiinka Hore u sii yaraanaya si loo xakameeyo dabacsanaanta dharka si cabbirka dharka looga dhigo mid ka sii heer sarreeya.
3.Mashiinka jarista si loo xakameeyo gole kasta oo wax lagu gooyo waa mid leh xasilooni iyo waliba hagaajinta waxtarka.
4. Nidaamka gawaarida gawaarida si loo hagaajiyo awoodda wax soo saarka.
Waxaan haynaa geedi socod kormeer badeecadeed oo dhameystiran, laga bilaabo kormeerka maaddada, jarista kormeerka darbiyada, kormeerka alaabada semi-dhammeeyay, kormeerka alaabada ee dhameystiran si loo hubiyo tayada wax soo saarka. Markaa tayada ayaa lagu xakameyn doonaa marxalad kasta.
Waxaan haynaa koox xoog leh oo R&D ah oo ay kujiraan naqshadeeye, qaabeeyayaal sameeyayaal, muunad sameeyeyaal si ay kaaga caawiyaan inaad soo saarto alaab cusub.
Waxaan haynaa koox iib ah oo xoog leh si ay kuu siiyaan adeegga ugu fiican ee amarradaada. Iyagu waa xirfadlayaal iyo dulqaad leh khibrad hodan ah.
Gabdhaha isboortiga haweenka S2020014
Gabdhaha isboortiga haweenka S01946
Gabdhaha isboortiga haweenka ee X200AQA001
Shaati-dumar Dumar X200245
Gabdhaha isboortiga haweenka ee X200114
Dharka gaaban ee haweenka S2020015
Dharka dumarka ee SO1947-3
Dharka gaaban ee haweenka X200251
Dharka gaaban ee SP20-01-03
Gabdhaha isboortiga haweenka SP20-01-02
Dumarka Jimicsiga Jirdhiska Jimicsiga Jimicsiga Lenggin Full ...
Haweenka ordaya haanta dharka isboortiga dharka jimicsiga sare ...
Arabella waxay ahaan jirtay ganacsi qoys oo ahaa warshad jiil. Sannadkii 2014, saddex ka mid ah carruurta guddoomiyaha waxay dareemeen inay wax macno badan samayn karaan kaligood, sidaa darteed waxay dejiyeen Arabella si ay diiradda u saaraan dharka yoga iyo dharka jir dhiska.
Iyadoo la adeegsanayo Daacadnimo, Midnimo, iyo naqshad casri ah, Arabella waxay ka soo saartay warshad yar oo wax soo saarkeedu yahay 1000-mitir oo laba jibbaaran ilaa warshad leh xuquuq soo dejin iyo soo dejin madaxbanaan oo maanta ah 5000-mitir murabac. Arabella waxay ku adkeysaneysay inay hesho tiknoolajiyad cusub iyo dhar tayo sare leh si ay u siiso alaabada ugu fiican macaamiisha.
Arabella mashquul productios bishii Maarso
Abaalmarinta Arabella ee Shaqaalaha tolidda tolidda ee aadka u wanaagsan
Biloow Weyn oo Gu'ga Seaon-Cusub Cus ...
Kooxda Arabella ee u dabaaldegeysa Interna ...
Kooxda Arabella Soo Laab
4 # Dhismaha 2-3 / F, No.354, Jiyin Road, Degmada Tong'an, Xiamen City, Gobolka Fujian, 361100, Shiinaha
24 SAACADAHA Khadka
Hada macluumaad noo soo dir